ကမ္ဘာပေါ်ရှိ A မှ Z အထိ ကား Brand Name များ
အရည်အသွေးတွေနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံ ထုတ်ကားတွေဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက ထိပ်တန်းကားကုမ္ပဏီတွေကြား နေရာယူထားနိုင်ပါတယ်။ ဂျပန်က နာမည်ကြီး ကားကုမ္ပဏီတွေဖြစ်ကြတဲ့ Toyota? Honda နဲ့ Mazda တို့ဟာ အဲဒီ စာရင်းမှာ ထိပ်ပိုင်းကပါဝင်နေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဂျပန်ကားတွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်က ယာဉ်မောင်းတွေရဲ့ နှလုံးသားတွေကို သိမ်းပိုက်ထားပြန်ပါသေးတယ်။ ဆက်လက်ပြီး အသစ်အသစ်သော ဇိမ်ခံကားတွေကိုလည်း အဆုံးမရှိဆက်ထုတ်နေပါသေးတယ်။ အဲဒီလို ကားတွေကို ထုတ်လုပ်နေတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံက ကားနာမည်တွေ၊ လိုဂိုတွေနဲ့ ပုံတွေ၊ Brand တွေအကြောင်းကို ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ Motoring ကဏ္ဍအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါရစေ။
သူတို့ရဲ့ တီထွင်ဆန်းသစ်တဲ့ ဒီဇိုင်း၊ မြင့်မားတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေနဲ့အတူ ကမ္ဘာ့ကားဈေးကွက်ကို ဘယ်လိုလွှမ်းမိုးထားတာလဲ။ Toyota နဲ့ Honda တို့ဟာ ဈေးကွက်မရှိတဲ့အခြေအနေကနေ ဥရောပနဲ့ အမေရိကက ကားလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့အထိ ဘယ်လိုရောက်ရှိလာခဲ့တာလဲ။ ကြည့်လိုက် ကြရအောင် ...။
တည်ထောင်သည့်ကာလ - ၁၉၃၇ - လက်ရှိ
ရုံးချုပ်တည်ရှိရာ - Toyota? Aichi? Japan
တည်ထောင်သူ။ မိခင်ကုမ္ပဏီ - Kiichiro Toyoda
ဝက်ဘ်ဆိုက် - http://www.toyota-global.com/
တိုယိုတာဟာ ဒီနှစ်ထဲမှာပဲ ကုမ္ပဏီတည်ထောင်တာ နှစ် ၈၀ ပြည့်ခဲ့ပါတယ်။ တိုယိုတာဟာ ဥရောပမှာတော့ သက်တမ်းအရင့်ဆုံး ကားထုတ်လုပ်သူတွေထဲက မဟုတ်ပေမယ့် ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကောင်းဆုံးကားတွေ ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကုမ္ပဏီကနေ အရည်အသွေးမြင့်ပြီး လုံခြုံရေးမြင့် မော်တော် ယာဉ်တွေကို ထုတ်လုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဆီကနေ ဆန်းသစ်ပြီး တီထွင်နိုင်မှုအားကောင်းတဲ့ ကားသစ်တွေကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းထုတ်လုပ်လို့နေပါတယ်။ တိုယိုတာကနေ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ AHDA(Automated Highway Driving Assist) အဝေးပြေးလမ်းတွေမှာ အလိုအလျောက် ယာဉ်မောင်းအထောက်အကူပြုစနစ်ကို US ကတစ်ဆင့် တီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနည်းပညာကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုခဲ့တဲ့ တိုယိုတာရဲ့ Prius? Camry နဲ့ Highlander တို့ဟာ အာမခံအဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုကပေးအပ်တဲ့ Top Safety Pick ဆုကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်က US မှာရရှိခဲ့ပါတယ်။
တည်ထောင်သည့်ကာလ - ၁၉၈၉ - လက်ရှိ
ရုံးချုပ်တည်ရှိရာ - Nagoya? Japan
တည်ထောင်သူ/ မိခင်ကုမ္ပဏီ - Eiji Toyoda
ဝက်ဘ်ဆိုက် - http://www.lexus-int.com/
တိုယိုတာနဲ့ တန်းတူတဲ့ Nissan? Lexus တို့ ဟာ နောက်ဆုံးပေါ်မော်ဒယ်လ်တွေနဲ့အတူ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးကားတွေဖြစ်ပါတယ်။ Lexus ကနေ ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှာ ဆန်းကြယ်တဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့အတူ L400 မော်ဒယ်လ်ကို ထုတ်လုပ်လိုက်လို့ အမေရိကန်မှာ Honda က ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Acura ကားတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကို ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Lexus ကားတွေရဲ့ ဒီဇိုင်းကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက ထိပ်တန်းဇိမ်ခံကားတွေနဲ့ မတူကွဲပြားစွာ ထုတ်လုပ်ရမယ်လို့ သူ့ရဲ့ မိခင်ကုမ္ပဏီက စည်းကမ်းချမှတ်ထားပါတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာတော့ စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်လာတဲ့ Lexus ကုမ္ပဏီဟာ အဆင့်အတန်းမြင့်ကားတွေထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံ ၅၀ စာရင်းထဲ ဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
တည်ထောင်သည့်ကာလ - ၁၉၀၉ - လက်ရှိ
ရုံးချုပ်တည်ရှိရာ - Hamamatsu? Shizuoka? Japan
တည်ထောင်သူ/မိခင်ကုမ္ပဏီ - Michio Suzuki
ဝက်ဘ်ဆိုက် - http://www.globalsuzuki.com/
Suzuki ဟာ ကနဦး မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေ ထုတ်လုပ်ရာမှာ ကျော်ကြားခဲ့တာပါ။ ဒီဂျပန်ကား ကုမ္ပဏီဟာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာတော့ ကမ္ဘာ့ကားထုတ်လုပ်သူတွေထဲ နံပါတ် ၁၀ နေရာကိုရတဲ့အထိ အများကြီးလေ့လာသင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဆူဇူကီးကနေ ATVs လို့ခေါ်တဲ့ ဘီးလေးဘီးပါ All-terrain Vehicle တွေ၊ ဓာတ်ဆီ ဒါမှမဟုတ် ဒီဇယ်သုံး Marine Engine တွေနဲ့ မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ကုမ္ပဏီဟာ နိုင်ငံ ၂၃ နိုင်ငံမှာ ပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါင်း ၃၅ ခုအထိ ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေပါတယ်။
တည်ထောင်သည့်ကာလ - ၁၉၁၅ - လက်ရှိ
ရုံးချုပ်တည်ရှိရာ - 3-1 Chome? Fuchu? Aki? Hiroshima? Japan
တည်ထောင်သူ/မိခင်ကုမ္ပဏီ - Ford Motor Company
ဝက်ဘ်ဆိုက် - http://www.mazda.com/
Mazda ဟာ ဂျပန်ကားကုမ္ပဏီတွေထဲ သက်တမ်းအရင့်ဆုံး ကားထုတ်လုပ်သူတွေထဲက တစ်ခုပါ။ Mazda ဟာ ၂၀ ရာစုအစကတည်းက ကားတွေ စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး Mazda Jeep ဟာ သူ့ရဲ့ ဂန္ထဝင်ကားအမျိုးအစားတစ်ခုပါ။ ကမ္ဘာ့အဆင့် ကားထုတ်လုပ်သူဖြစ်သလို ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ မော်ဒယ်လ်သုံးခုကို အစီးရေ သုံးသန်းအထိ ထုတ်လုပ်ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတွင်းမှာလည်း အဆင့်အတန်းမြင့် မော်တော်ယာဉ်တွေကို စီမံထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၇၉ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၁၀ ကြား ဖို့ဒ်နဲ့ ပါတနာအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ Autozam? Efini? Eunos နဲ့ Xedos တို့လို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့သလို ထင်ရှားကျော်ကြားလာခဲ့ပါတယ်။
တည်ထောင်သည့်ကာလ - ၁၉၄၆ - လက်ရှိ
ရုံးချုပ်တည်ရှိရာ - Minato? Tokyo? Japan
တည်ထောင်သူ/မိခင်ကုမ္ပဏီ - Soichiro Honda? Takeo Fujisawa
ဝက်ဘ်ဆိုက် - http://world.honda.com/
Honda ဟာ Two-Stroke အင်ဂျင်ဆိုင်ကယ်တွေကို စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာပါ။ နောက်တော့ ကားထုတ်လုပ်ခဲ့ရာမှာလည်း နာမည်ကျော်ကြားလာခဲ့သလို ကမ္ဘာမှာတော့ အကြီးဆုံးဆိုင်ကယ်ထုတ်လုပ်သူတွေထဲက တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
တည်ထောင်သည့်ကာလ - ၁၉၈၆ - လက်ရှိ
တည်ထောင်သူ/မိခင်ကုမ္ပဏီ - Honda Motor Company Ltd
ဝက်ဘ်ဆိုက် - http://www.acura.com/
Acura ကို အစောပိုင်းက သားစဉ်မြေးဆက် ခွဲဝေပိုင်ဆိုင်လာခဲ့ကြတာပါ။ ပထမဦးဆုံး တည်ထောင်ခဲ့တာက ၂၉၈၆ ခုနှစ်မှာဖြစ်ပြီး အခုထက်ထိလည်း ဂျပန်နိုင်ငံပြင်ပမှာ ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ ကားတွေကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချဆဲဖြစ်ပါတယ်။ Acura ကား တွေထဲ ပထမဆုံး SUV ကားဖြစ်တဲ့ RDX ကားကို တရားဝင်မိတ်ဆက်ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝန်းထုတ်လုပ်ရောင်း ချခဲ့ပါတယ်။
တည်ထောင်သည့်ကာလ - ၁၉၇၀ - လက်ရှိ
တည်ထောင်သူ/မိခင်ကုမ္ပဏီ - Iwasaki Yatarō
ဝက်ဘ်ဆိုက် - http://www.mitsubishi-motors.com/
Mitsubishi ဟာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ထင်ရှားတဲ့ ကားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီဟာ ငွေရေးကြေးရေးအခက်အခဲကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှာ Daimler-Chrysler ကုမ္ပဏီနဲ့ ပူးပေါင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီကုမ္ပဏီဟာ နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း ကောင်းတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပေမယ့် ဘဏ္ဍာရေးပြဿနာတွေကြောင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေလည်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း ရပ်မသွားဘဲ မော်ဒယ်လ်သစ်တွေနဲ့ Lancer သို့မဟုတ် Outlander လိုကျော်ကြားတဲ့ကားအမျိုး အစားတွေကို ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
တည်ထောင်သည့်ကာလ - ၁၉၃၃ - လက်ရှိ
တည်ထောင်သူ/မိခင်ကုမ္ပဏီ - Masujiro Hashimoto? Kenjiro Den? Rokuro Aoyama? Meitaro Takeuchi? Yoshisuke Aikawa
ဝက်ဘ်ဆိုက် - http://www.nissan-global.com/
Renault-Nissan alliance ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဒီ Brand ဟာ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း ကားထုတ်လုပ်သူ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာ့ကားအများဆုံးထုတ်လုပ်ရောင်းချနိုင်တဲ့အဆင့် ၆ နေရာကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီဟာ Dongfeng နဲ့အတူ ရုရှားနည်းပညာတွေ ထုတ်လုပ်ခဲ့ချိန်တုန်းက အဓိကဈေးကွက်အဖြစ် တရုတ်နဲ့ ရုရှားတို့ကို ဖြန့်ချိရောင်းချခဲ့ပါတယ်။
NISSAN LEAF ဟာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်နောက် ပိုင်းကစလို့ ကမ္ဘာ့ကားပရိသတ်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံပေါင်း ၃၅ နိုင်ငံကို သူတို့ရဲ့ လျှပ်စစ်ကားတွေကို ဖြန့်ဖြူးနေနိုင်ပါပြီ။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ လျှပ်စစ်ကား အစီးရေ တစ်သိန်းတစ်သောင်းအထိ ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီး သူတို့ရဲ့ အောင်မြင်မှုကို ဖော်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ရုံးချုပ်တည်ရှိရာ - Hopewell Centre? Wan Chai? Hong Kong
တည်ထောင်သူ။မိခင်ကုမ္ပဏီ - Nissan Motor Company
ဝက်ဘ်ဆိုက် - http://www.infiniti.com
Nissan ရဲ့ အခွဲကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Infiniti ဟာ ဇိမ်ခံကားတွေထုတ်လုပ်ရာမှာ ကျော်ကြားပါတယ်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှာ ထူထောင်ခဲ့ပြီး ပထမဆုံးသူတို့ရဲ့ မော်တော်ယာဉ်တွေကို US ကိုပဲ ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ နောက်နှစ်ပေါင်း ၂၀ အတွင်းမှာတော့ နိုင်ငံပေါင်း ၁၅ နိုင်ငံအထိ တိုးချဲ့ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါတွေကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ကျော်ကြားတဲ့ ကားကုမ္ပဏီကြီးတွေအကြောင်းတွေကို ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ဂျပန်ကားကုမ္ပဏီတွေအကြောင်းကို ဖော်ပြပေးပါဦးမယ်။